Fitenin-tena - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-03 > vatana teny
Mifandray tsara ve ianao? Tsy amin'ny alalan'ny teny na soratana ihany no ifandraisantsika, fa amin'ny alalan'ny famantarana izay omenay na tsy fantatra. Ny fitenin'ny vatantsika dia mifandray amin'ny olona hafa ary mandefa fampahalalana fanampiny amin'ny teny tsotra. Ohatra, ny olona manatrika fanadinadinana asa dia mety hilaza amin'ny mpampiasa azy fa mahazo aina izy ireo, saingy ny tanany voafintina sy ny fihetsehan'ny seza dia mampita zavatra hafa. Ny olona iray dia mety ho liana amin'ny zavatra lazain'ny olon-kafa, fa ny tsy fisian'ny masony tsy tapaka dia manala ny lalao. Mahaliana fa ny apostoly Paoly dia milazalaza fa anisan’ny tenan’i Kristy ny tsirairay avy amintsika: “Fa hianareo no tenan’i Kristy, ary samy rantsam-batana avokoa izy rehetra.” (1. Korintiana 12,27).
Nipetraka ny fanontaniana hoe: Fiteny inona ao amin'ny vatana inona no iresahanao amin'ny maha-tenan'i Kristy? Mety hiteny na hanoratra zavatra tsara momba ny zavatra tsara, tsara sy mampahery ianao, nefa dia io fomba fihetsika io no milaza zavatra betsaka kokoa. Ny fomba mamolavola ny fiainanao no mampita am-peo mazava sy mazava ny soatoavinao sy ny zavatra inoanao. Ny toetranao dia mampita ny tena hafatra entinao amin'ny mpiara-belona aminao.
Mafana sy mafana ve isika ary manaiky ny hafa ho olona isam-batan'olona, ​​fiangonana na fiangonana? Sa isika tia tena ary adala ary zara raha mahita olona ivelan'ny vondrona bitika misy antsika? Ny toetrantsika dia miteny sy mifandray amin'ny tontolo fandinihana. Ny tenin'ny fitiavana, ny fanekena, ny fankasitrahantsika ary ny fananantsika dia azo sakanana raha tsy mandà azy io ny fitenin'ny vatantsika.
« Fa tahaka ny tena iray ihany, nefa maro ny momba ny tena, nefa ny momba ny tena rehetra, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na Jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo, ary samy feno fanahy iray ihany. Fa na ny tena aza dia tsy iray momba ny tena, fa maro » (1. Korintiana 12,12- iray).
Tianay ny hanambara fa ny fitenin'ny vatana dia tokony hanome voninahitra ny mpiara-belona rehetra. Rehefa mampiseho ny fitiavana lehibe isika, dia ho hitan’izy ireo fa tena mpianatr’i Kristy tokoa isika, satria tia antsika izy ka nanolotra ny tenany ho antsika. Hoy i Jesosy: “Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Tahaka ny nitiavako anareo no tokony hifankatiavanareo koa. Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, raha omenareo ny fitiavana » (Jaona 13,34-35). Raha ampitaina amin’ny olona saika amin’ny toe-javatra rehetra eo amin’ny fiainana ny fitiavana an’i Kristy ao anatintsika, ny fitenin’ny vatantsika kosa dia manamafy izay lazaintsika. Izany no fifandraisana mahomby.
Mivoaka am-bava mora foana ny teny ary mora vidy raha tsy voatohana amin'ny ataonao sy ny fihetsinao. Rehefa mifampiresaka ianao dia alao amin'ny alàlan'ny teny lazaina na voasoratra na amin'ny fomba iainanao no ahitan'ny olona ny fitiavan'i Jesosy anao. Fitiavana iray izay mamela heloka, manaiky, manasitrana ary mahatratra ny olona rehetra. Enga anie ity ho fitenin'ny vatanao amin'ny resaka rehetra anananao.